Jeneraal Nuur Shirbow iyo Xoghayihii xafiiska R/wasaarah oo lagu aasay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 22 February 2014 4 April 2019
Muqdisho – Mareeg.com: Jeneraal Nuur Shirbow oo shalay ku geeriyoodey weerarkii Alshabaab ku qaadeen madaxtooyada Soomaaliya ayaa maanta lagu aasay Qubuuraha Sheekh Suufi ee degmada Warta Nabadda ee magaalada Muqdisho, ayadoo ay ka qeyb galeen xubno ka tirsan labada gole ee dowladda, siyaasiyiin horey xilal uga soo qabtay dalka xilliyo kala duwan, ehelada Marxuumka iyo saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda.
Sheekh Cismaan oo xigta dhaw ay ahaayeen ayaa ka sheekeeyeen taariikhda Allaha u naxariistee Marxuum Nuur Shirbow oo tilmaamay in uu ku dhintay da’da 73 sano jir, islamarkaana uu sheegay in uu ahaa shaqsi ku weyn dowladnimada iyo ka shaqeynta horumarka dalka.
Cali Mahdi Maxamed oo mar madaxweyne ka soo noqday dalka Soomaaliya iyo Cali Maxamed Geeddi oo R/wasaare ka ahaa dalka xilligii Madaxweyne C/laahi Yuusuf Axmed ayaa labaduba waxa ay tacsi u direen ehelada iyo shacabka Soomaaliyeed, iyagoo ku tilmaamay in uu ahaa sargaal ciidan oo u taagnaa gudashada waajibaadka loo igmaday, waxayna tacsi taa la mid ah u direen shacabka Soomaaliyeed dadkii kale ee falkaasi shalay ku dhintay.
Wasiirka Maaliyadda ee Xukuumadda Soomaaliya Xuseen Cabdi Xalane oo isna aaska ka hadlay tacsi u diray ehelada iyo umadda Soomaaliyeed dadkii shalay ku nafwaayay weerarkii ee ay shabaabku la damacsanaayeen in dad intaa ka badan ay ku laayaan.
Dhanka kale, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa maanta ka qeybgalay aaska Xoghayihii joogtada ee xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Marxuum Maxamuud Xersi Cabdulle oo lagu aasay dugsiga Tababarka ciidanka Booliska ee Jeneraal Kaahiye (Ex. Iskool Bolisiya).
Aaska marxuum Maxamuud Xersi Cabdulle oo shalay ku geeriyooday weerarkii shalay Alshabaab ku qaaday madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa sidoo kale ka qeybgalay Ra’iisul Wasaarihii hore ee Xukuumada Federaalka Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid”, xubno ka tirsan golaha Wasiirada, xildhibaano iyo howlwadeeno ka tirsan xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Ra’iisul Wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed oo goobta aaska ka hadlay ayaa tacsi u diray Qoyskiisa, Qaraabada iyo ehelada marxuumka, wuxuuna xusay in Maxamuud Xersi Cabdulle uu ahaa shaqsi daacad ah isla markaana naftiisa u huray Qaranka Soomaaliyeed.
“Maxamuud Xersi wuxuu ahaa shaqsi daacad ah oo naftiisa u huray Qaranka, wuxuuna ka yimid dalka dibdiisa isaga oo heysta amni iyo dhaqaale. Balse go’aankiisu wuxuu ahaa inuu ka qeyb qaato dhismaha iyo horumarinta dawladnimada Soomaaliya” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Cabdiweli Sheekh.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sidoo carabka ku adkeeyey in weerarkani aanu dib u dhac ku keeni doonin go’aanka dawladda ee ah in laga sifeeyo dalka Alshabaab, wuxuuna ku celiyay in ciidanka qalabka ay u diyaar garoobeen sidii dalka looga ciribtiri lahaa ururkaas.
Ugu dambeyntiina Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa faray dhamaamba hay’addaha amnigu inay muujiyaan feejignaan kana hortagaan dhagarta caddowga.
Sanadguuradii 44-aad ee ciidanka Asluubta Soomaaliya oo la xusay (Sawirrro)